Amabhonasi eRand Ku Inthanethi Ekhasino Yabadlali baseNingizimu Afrika
Ikhaya / ibhonasi yekhasino ngerandi
Ukugembula ekhasino ye-inthanethi akuyinto entsha eNingizimu Afrika kodwa ekwaba yinto eyaziwayo kakhulu eminyakeni emihlanu kuya kweyisishiyagalombili edlule. Sekuyiminyaka eminingi amakhasino e-inthanethi amaningi egxile emakethe yaseMelika, kodwa ngenxa yemithetho entsha yokugembula ku-inthanethi , amakhasino e-inthanethi amaningi adinga ukungena kwezinye izimakethe ukukhulisa imali engenayo.
Amanye Amakhasino Angena Emakethe yase-SA
Uzobona ukuthi amakhasino e-inthanethi amaningi amukela abantu baseNingizimu Afrika futhi aze asivumele nokuthi sisebenzise amabhange akuleli ukudiphozitha ukheshi, futhi sidlale ngeRandi laseNingizimu Afrika (ZAR). Kubuye kwaba nentuthuko kwezobuchwepheshe maqondana nobuchwepheshe be-inthanethi obwenza amakhasino e-inthanethi abe mnandi kakhulu ukudlala kuwo.
Amabhonasi Angcono Amakhasino Asebenzisa Irandi laseNingizimu Afrika
Ingabe Kusemthethweni Ukugembula Ku-inthanethi eNingizimu Afrika
INingizimu Afrika isemkhankasweni wokubheka ukuthi ingalawula kanjani futhi inikeze amalayisense ekhasino ye-inthanethi kanti ngenkathi lokhu kwenzeka, abadlali bayaqhubeka nokudlala kunoma iyiphi ikhasino ye-inthanethi eyamukela izakhamizi zaseNingizimu Afrika nemali yeRandi / ZAR.
Ngenkathi lokhu kusadingidwa futhi kuseyinto engacaci, abantu baseNingizimu Afrika bangaqhubeka nokudiphozitha, badlale, futhi bakiphe imali kumakhasino e-inthanethi. Cishe wonke amakhasino e-inthanethi amukela manje abadlali be-SA atholakala ngaphandle kwemingcele yeNingizimu Afrika. Ngakho-ke akwenzeki ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika abeke imithetho yaseNingizimu Afrika ezinkampanini ezisebenza ngaphandle kwemingcele yethu.
Uma ngabe uhulumeni engalawula le mboni, kusho ukuthi amakhasino e-inthanethi athile azovunyelwa ukusebenza emakethe yokugembula yaseNingizimu Afrika. Uhulumeni uzohola intela kumakhasino e-inthanethi, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi abhalise ukugembula kwamakhasino e-inthanethi eNingizimu Afrika. Angaphinde athande ukukhetha izinkampani zaseNingizimu Afrika, okungasho imali ethe xaxa yentela kubo kodwa balindele amalayisense ambalwa asemthethweni azosebenza eNingizimu Afrika ngokuzayo.
Kungani ungasebenzisi wonke Amakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika aku-inthanethi asohlwini lwethu? Kunezinhlobonhlobo eziningi ongakhetha kuzo futhi senze isiqiniseko sokwenza umsebenzi wethu wasekhaya futhi sifaka phakathi amakhasino e-inthanethi amahle kakhulu futhi athembeke kakhulu atholakalayo. Sibhale amakhasino ahloniphekile aziwa ngemikhuba yawo emihle yebhizinisi nemithetho eqinile yokuphepha. Lokhu kusho